Ɔsɛnkafo 12 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
12 Enti kae wo Bɔfo+ Kɛse no, wo mmeranteberem,+ ansa na nna bɔne no aba; ansa na mfe a wobɛka sɛ: “Minni ho anigye”+ no adu;+ 2 kae no ansa na owia ne hann ne ɔsram ne nsoromma aduru sum,+ na osu amuna asan atɔ bio; 3 saa bere no, ofie+ ahwɛfo ho popo, na mmarima ahoɔdenfo mu kuntun,+ na mmea a wɔyam ade+ gyae adwuma, sɛ wɔn so atew nti, na mmabaa a wɔhwɛ mfɛnsere mu+ ani so yɛ wɔn wusiwusi; 4 saa bere no, abɔnten pon mu toto,+ ma owiyammo so dede brɛ ase,+ na anomaa su nyan onipa, ma mmabea nnwontofo nyinaa nne brɛ ase.+ 5 Osuro nea ɛwɔ soro, na kwan mu yɛ no hu. Ɔsonkoran dua pae nhwiren,+ na abebɛw twe ne ho ase; n’anom nyɛ no dɛ bio,* efisɛ onipa ani kyerɛ ne homebea,+ na asũfo di akɔneaba abɔnten so;+ 6 kae no ansa na dwetɛ hama no mu atew, na sika kora no apae,+ na ahina a wɔde kɔ asu no abɔ, na nkyimii a wɔde tow nsu wɔ abura mu no abubu. 7 Ɛno na dɔte san kɔ asase mu+ sɛnea na ɛte kan no, na honhom+ no nso asan akɔ nokware Nyankopɔn+ a ɔde mae+ no hɔ. 8 “Ahuhude mu ahuhude!” ɔsɛnkafo+ no na ose, “Ade nyinaa yɛ ahuhude.”+ 9 Ɔsɛnkafo no nyansa+ nyinaa mu no, ɔsan kyerɛkyerɛɛ ɔman no daa+ ma wonyaa nimdeɛ, na odwinnwen nneɛma ho yɛɛ nhwehwɛmu kɔɔ akyiri,+ na ama watumi ahyehyɛ mmebusɛm pii yiye.+ 10 Ɔsɛnkafo no hwehwɛe sɛ obenya nsɛm a ɛyɛ dɛ+ na wakyerɛw nsɛmpa a ɛyɛ nokware.+ 11 Anyansafo nsɛm te sɛ nantwika poma,+ na nsɛm ano boaboa te sɛ nnadewa a wɔde bobɔ nneɛma mu;+ efi oguanhwɛfo+ biako hɔ. 12 Eyinom akyi de, me ba, hwɛ wo ho yiye wɔ ade foforo biara ho, efisɛ nhoma pii akyidi nni awiei, na ne sua bebrebe hyɛ ɔhonam brɛ.+ 13 Asɛm no awiei, nea yɛate nyinaa ne sɛ: Suro nokware Nyankopɔn+ no na di ne mmara nsɛm so.+ Na eyi ne onipa asɛde. 14 Adwuma biara, nea ahintaw nyinaa, papa oo, bɔne oo, nokware Nyankopɔn no bebu ho atɛn.+
^ Efi Hebri asɛm a ɛkyerɛ aduaba bi a ɛma obi anom yɛ no dɛ mu.